နေပူထဲ ကြက်ဥ ကြော်ပြတဲ့သူကို ရဲကဖမ်းဆီး...! - Thadin
HomeNEWSနေပူထဲ ကြက်ဥ ကြော်ပြတဲ့သူကို ရဲကဖမ်းဆီး…!
April 20, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on နေပူထဲ ကြက်ဥ ကြော်ပြတဲ့သူကို ရဲကဖမ်းဆီး…!
နေပူလွန်းလို့ကြက်ဥကြော်ရကြောင်း ရုပ်သံတင်ခဲ့သူအား ထိုင်းမြောက်ပိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ က စစ်ဆေး April 20 ,2019ထိုင်းမြောက်ပိုင်း လမ်းပန်းမှာ နေအရမ်းပူလာပြီး ကြက်ဥကြော်ရတယ်လို့ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထိုင်းဆိုရှယ် မီဒီယာတွေမှာ ပေါက်နေတဲ့ရုပ်သံ ကို တင်တဲ့ ပိုင်ရှင် က
သူဟာ မီးဖိုပေါ်မှာ ဆီဒယ်အိုးတင်ထားပြီး ဆီပူလာမှ ဒယ်အိုးကို နေပူထဲကိုယူထုတ်လာပြီး ကြက်ဥကြော်ပြ နောက်ပြောင်ခဲ့တာပါလို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
သူ့ ရုပ်သံကို နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာပါဖေါ်ပြလာနေလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ က ဒီဖြစ်ရပ်ကို အဖြစ်မှန်မမှန် စစ်ဆေးခဲ့ရပါတယ်၊ ခုလို မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံပြီး ပို့ စ် တင်လို့ အဖွဲ့ အစည်း နိုင်ငံ အကျိုး ထိခိုက်တယ်ဆိုရင် ကွန်ပြူတာဥပဒေအရ တရားစွဲလို့ ရပြီး ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နပေူလှနျးလို့ကွကျဥကွျောရကွောငျး ရုပျသံတငျခဲ့သူအား ထိုငျးမွောကျပိုငျး ရဲတပျဖှဲ့ က စဈဆေး April 20 ,2019ထိုငျးမွောကျပိုငျး လမျးပနျးမှာ နအေရမျးပူလာပွီး ကွကျဥကွျောရတယျလို့ယခုရကျပိုငျးအတှငျး ထိုငျးဆိုရှယျ မီဒီယာတှမှော ပေါကျနတေဲ့ရုပျသံ ကို တငျတဲ့ ပိုငျရှငျ က
သူဟာ မီးဖိုပျေါမှာ ဆီဒယျအိုးတငျထားပွီး ဆီပူလာမှ ဒယျအိုးကို နပေူထဲကိုယူထုတျလာပွီး ကွကျဥကွျောပွ နောကျပွောငျခဲ့တာပါလို့ဝနျခံခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ။
သူ့ ရုပျသံကို နိုငျငံတကာသတငျးတှမှောပါဖျေါပွလာနလေို့ရဲတပျဖှဲ့ က ဒီဖွဈရပျကို အဖွဈမှနျမမှနျ စဈဆေးခဲ့ရပါတယျ၊ ခုလို မဟုတျမမှနျ လုပျကွံပွီး ပို့ ဈ တငျလို့ အဖှဲ့ အစညျး နိုငျငံ အကြိုး ထိခိုကျတယျဆိုရငျ ကှနျပွူတာဥပဒအေရ တရားစှဲလို့ ရပွီး ထောငျဒဏျငါးနှဈအထိ အပွဈပေးနိုငျပါတယျ။
Vaseline သုံးပြီး ၁၀ နှစ်ပိုငယ်သွားအောင် အသားအရေထိန်းသိမ်းကြမယ်…!
This Month : 41280
This Year : 236678
Total Users : 595702
Total views : 2736694